Cabdirisaaq Macalin Cilmi: Mire, Hurre iyo Gabadh Godban!.
Xujodii Raadiyow Muqdisho waxay fadhigii ku dhalisay dood kulul. Dhakhtar, telefoon iyoraadye waxa af Soomaali lagu yidhaa lama helayo iyo waa la helayaa ee innaga ayaan aqoonin. Waa magacyo qalaad oo qalab iyo sanco shisheeye summad u ah. Sidee baan af Soomaali ugu heli karaa? Maxaase bulshada wax aan suurogal ahayn loogu hawlayaa? War seed wax leedahay; dhakhtarnimadu ma sanco shisheeyaa? Allow yaa reer miyiga su’aala! Way isku gawso beeleen.
Wuu naxay. Macallinka ay sheegayaan waa kii aynu kor kusoo aragnay. Wuxuu ku jawaabay
* Xuquuqda hadalka ka bilowda Xilli lagu jiray diraac goodlaha gurkiisa hore kuna dhammaadamuddaci-gawrac markhaatigiisa wata ayaan ahay, iyo meerisyada gabayga ahiba waxay u dhawran tahay caalimkaa, aftahanka iyo gabayaaga ah ee ay sheekadu ku socoto. Eraybixinta ah maareeye, katiin iyo danani na wuxuu ugu deeqay bahweynta af Soomaaliga ku hadasha.